အမေရိကန်နိုင်ငံ UNIVERSITY OF CALIFORNIA က သင်တန်းဆင်းလက်မှတ်သုံးခုကို အမှတ်အများကြီးနဲ့ ရရှိခဲ့တဲ့ ချစ်သုဝေ - Shwe Khit
ချစ်လှစွာသောပရိတ်သတ်ကြီးရေ သရုပ်ဆောင်တဲ့နေရာမှာလည်း သူမတူအောင်ထူးချွန်သလို သီချင်းဆိုတဲ့နေရာမှာလည်း နှစ်ယောက်မရှိနိုင်အောင် တော်လွန်းတဲ့ ချစ်သုဝေကတော့ အပျိုဘဝကတည်းကနေ ဒီနေ့ဒီအချိန်ထိ ပရိသတ်တွေရဲ့ အားပေးချစ်ခင်မှုကို မလျော့စတမ်းရရှိပိုင်ဆိုင်ထားတာ ဖြစ်ပါတယ်။
အဆိုတော်သရုပ်ဆောင် ချစ်သုဝေက ဆရာဝန်တစ်ယောက်ပီပီ ဉာဏ်လည်းကောင်းပြီး သူများထက် ထူးချွန်ထက်မြက်သူလေး တစ်ယောက်ဆိုလည်း မမှားပါဘူး။ လက်ရှိကိုဗစ်ကာလမှာလည်း ချစ်သုဝေက ပရဟိတအလုပ်တွေ လုပ်ကိုင်ရင်းနဲ့ပဲ ကိုယ့်အတွက် ကိုယ်အကျိုးရှိစေမယ့် သင်တန်းတွေကို အွန်လိုင်းကနေ တက်ရောက်နေခဲ့တာ ဖြစ်ပါတယ်..။
ဒီတစ်ခေါက်မှာလည်း အဆိုတော်သရုပ်ဆောင် ချစ်သုဝေက တစ်လအတွင်းမှာတင် University of California က The Foundations of Happiness at Work, Mindfulness and Resilience to Stress at Work,
Empathy and Emotional Intelligence at Work စတဲ့ သင်တန်း (၃) ခုကို အမှတ်တွေအများကြီးနဲ့ ရရှိခဲ့တာကြောင့် “ ဟုတ်တယ်….. ငါလုပ်နိုင်ခဲ့ပြီ!!!!!!! မေမေ ထရီဇာက ဒရာမာတွေ အများကြီးကြားမှာ ဒီဂရီတွေနဲ့ အစီအစဉ်ကို ပြီးဆုံးခဲ့ပြီ… yahoo ” ဟုဆိုပြီး သူမရဲ့ ဖေ့စ်ဘုတ်စာမျက်နှာမှာ ဝမ်းသာအားရပြောလာပါတယ်..။
အဆိုတော်သရုပ်ဆောင် ချစ်သုဝေကတော့ သမီးနှစ်ယောက်နဲ့ အလုပ်တွေကြားထဲက သင်တန်းတွေကို ကြိုးစားပန်းစားတက်ရင်း သင်တန်းဆင်းအောင်လက်မှတ်တွေအများကြီးကို ရရှိခဲ့တာ လေးစားစရာပါပဲနော်။ ပရိသတ်ကြီးလည်း ချစ်သုဝေကို လေးစားပြီးရင်းလေးစားနေကြမယ် ထင်ပါတယ်။ ဖတ်ရှုပေးကြတဲ့ ပရိသတ်ကြီးအားလုံးလည်း သာယာပျော်ရွှင်တဲ့ နေ့လေးတစ်နေ့ကို ပိုင်ဆိုင်နိုင်ကြပါစေလို့ ဆုမွန်ကောင်းတောင်းပေးလိုက်ပါတယ်နော်..။
ခ်စ္လွစြာေသာပရိတ္သတ္ႀကီးေရ သရုပ္ေဆာင္တဲ့ေနရာမွာလည္း သူမတူေအာင္ထူးခြ်န္သလို သီခ်င္းဆိုတဲ့ေနရာမွာလည္း နွစ္ေယာက္မရိွနိုင္ေအာင္ ေတာ္လြန္းတဲ့ ခ်စ္သုေဝကေတာ့ အပ်ိဳဘဝကတည္းကေန ဒီေန့ဒီအခ်ိန္ထိ ပရိသတ္ေတြရဲ့ အားေပးခ်စ္ခင္မႈကို မေလ်ာ့စတမ္းရရိွပုိင္ဆိုင္ထားတာ ျဖစ္ပါတယ္။
အဆိုေတာ္သ႐ုပ္ေဆာင္ ခ်စ္သုေဝက ဆရာဝန္တစ္ေယာက္ပီပီ ဥာဏ္လည္းေကာင္းျပီး သူမ်ားထက္ ထူးခြ်န္ထက္ျမက္သူေလး တစ္ေယာက္ဆိုလည္း မမွားပါဘူး။ လက္ရိွကိုဗစ္ကာလမွာလည္း ခ်စ္သုေဝက ပရဟိတအလုပ္ေတြ လုပ္ကိုင္ရင္းနဲ့ပဲ ကိုယ့္အတြက္ ကိုယ္အက်ိဳးရိွေစမယ့္ သင္တန္းေတြကို အြန္လိုင္းကေန တက္ေရာက္ေနခဲ့တာ ျဖစ္ပါတယ္..။
ဒီတစ္ေခါက္မွာလည္း အဆိုေတာ္သ႐ုပ္ေဆာင္ ခ်စ္သုေဝက တစ္လအတြင္းမွာတင္ University of California က The Foundations of Happiness at Work, Mindfulness and Resilience to Stress at Work,
Empathy and Emotional Intelligence at Work စတဲ့ သင္တန္း (၃) ခုကို အမွတ္ေတြအမ်ားၾကီးနဲ့ ရရိွခဲ့တာေၾကာင့္ “ ဟုတ္တယ္….. ငါလုပ္ႏိုင္ခဲ့ၿပီ!!!!!!! ေမေမ ထရီဇာက ဒရာမာေတြ အမ်ားႀကီးၾကားမွာ ဒီဂရီေတြနဲ႔ အစီအစဥ္ကို ၿပီးဆုံးခဲ့ၿပီ… yahoo ” ဟုဆိုျပီး သူမရဲ့ ေဖ့စ္ဘုတ္စာမ်က္နွာမွာ ဝမ္းသာအားရေျပာလာပါတယ္..။
(၈) သိန်းကျော် ရနိုင်တဲ့ နိုင်ငံတော် မီးဖွားစရိတ် ဘယ်လိုလျှောက်ရမလဲ? နိုင်ငံတော် မှ မိခင်စရိတ် မီးဖွားစရိတ် ဘယ်လို လျှောက်ထားမလဲ?